Abaabulka Gaadiidka Dadweynaha ee Erzurum | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Waqooyi Bari25 Erzurum ReviewDhaqdhaqaaqa Nadaafadda ee Gaadiidka Dadweynaha ee Erzurum
12 / 03 / 2020 25 Erzurum Review, Gobolka Waqooyi Bari, GUUD, WADADA, Nidaamyada Tire Wheels, TURKEY
Wacyigelinta nadaafadda ee gaadiidka dadweynaha ee magaalada erzurum
Dawlada Hoose ee Magaalada Erzurum waxay bilaabatay abaabul ku saabsan sunta cayayaanka meelaha caamka ah, gaar ahaan gaadiidka dadweynaha iyo joogsiyada. Magaalada Erzurum, oo gaadiidleyda siisa adeegyada gaadiidku ay muwaadiniintu si nadiif ah u nadiifiyaan, dhammaan joogsiyada ay rakaabku sugayaan, iyo basaska, ayaa lagu baabi'iyay dawo.
Shaqada ay fuliyeen kooxaha ku xiran Waaxda Adeegyada Beeraha ee Magaala Weyne waxay ka heleen calaamado buuxa muwaadiniinta, iyadoo la xusay in howlaha lagu buufiyo ay sii socon doonaan waqtiyada joogtada ah. Bayaanka ay soo saartay Dawladda Hoose ee Magaaladda; Nadaafadda iyo nadaafadda ayaa lagu nuuxnuuxsaday adeegyada gaadiidka iyo goobaha dadweynaha ee Erzurum. Bayaanka, waxyaabaha soo socda ayaa lagu xusey: “Abuuritaanka jawi nadaafadeed ayaa ka mid ah mudnaanahayaga, iyo sidoo kale raaxada gawaarida gaadiidkeena iyo joogsiga basaska, halkaasoo muwaadiniinteena ay ku helaan adeeg wadareed.
Dareenkan, waxaan bilownay hawlo jeermi-dilis ah oo aan u fulinno sannad kasta annagoo kuleylinaya cimilada mar labaad sannadkan. Macnaha guud, waxaan dib u hagaajinay, nadiifinay isla markaana ku buufinay dhammaan basaskeenna ku dhex yaal degmadayada. Intaa waxaa u dheer, waxaan ku buufinaa meelaha joogsiga ah ee baska sidoo kale shaqada dayactirka iyo hagaajinta. Waxaan rabnaa inaan ogaano inaan sii wadidoono howlaheena wasakhaynta, oo waliba ay kujiraan goobo dadweyne, inagu dhexyaal.
Baska Erzurum istaago
Gaadiidka dadweynaha ee Erzurum
Adeegyada gaadiidka Erzurum